Madaxweyne Erdogan oo eedeeyey saraakiil American ah. – Radio Daljir
Luulyo 30, 2016 12:30 b 0
Istanbul, July 30 2016-Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa eedeeyn u jeediyay saraakiil ka tirsan ciidanka ammaanka dalka Mareykanka, kuwaas oo uu ku eedeeyay in ay ka dambeeyeen afgambigii dhicisoobay ee dalka Turkiga.
Recep Tayyip Erdogan, ayaa sarkaal sare oo ka mid ah militariga Mareykanka ku eedeeyay inuu la jiro dadkii isku deyay inay dowladda afgembiyaan, laba isbuuc ka hor, ninkaasna waxaa lagu magacabaa Janaraal Joseph Votel
General l Joseph Votel ayaa dhawaan sheegay in shaqa ka eryidda ciidamada Turkiga kadib afgembigii dhicisoobay uu wax u dhimayo wada shaqeynta militariga.
Dowladda Turkiga ayaa waxa ay dhowaan shaqadii kajoojisey boqolaal kamid ah saraakiisha ciidnaka dalkaasi oo la rumaysan yahay inay ku luglahaayeen afgembigii dhicisoobey ee kadhacay dalkaasi.
DHEGEYSO-Madaxweyne KX Jubbaland oo ka warbixiyey safarkiisa Gedo.